Coeliakie (glutenintolerantie) Somalisch - Voorlichting Vertaald
Coeliakie (glutenintolerantie) Somalisch
Home Diëtist Coeliakie (glutenintolerantie) Coeliakie (glutenintolerantie) Somalisch
Waa maxay xasaasiyadda cuntada? Xasaasiyadda cuntada, habka difaacaagu waxa uu ka falcelinayaa maaddooyinka qaarkood ee cuntadaada. Nidaamka difaaca waxa uu sameeyaa unugyada difaaca jirka ee borotiinnada laga helo cuntada. Barootiinnada kicin kara falcelinta xasaasiyadda waxaa loo yaqaannaa xasaasiyad. Xasaasiyadda la yaqaan waa borotiinno gaar ah oo ku jira caanaha lo'da ama lawska ku jira.
Waa maxay dulqaad la'aan? Jidhku waxa uu ka falcelin karaa cuntooyinka qaarkood isaga oo aan lahayn xasaasiyad. Markaa waa dareen cunno aan xasaasiyad lahayn. Waxaan ugu yeernaa dulqaad la'aan. Hal tusaale waa dulqaad la'aanta lactose. Dadku si fiican uma dheefi karaan lactose. Walxaha keena calaamadaha dulqaad la'aanta waxaa loo yaqaan kiciyeyaasha. Kiciyeyaashani waxay si dabiici ah ugu dhacaan cuntooyinka sida lactose-ka. Waxyaabaha ilaaliya sida sulphite sidoo kale waa kiciyeyaasha.
Sidee bay caadi u yihiin xasaasiyada cuntadu iyo dulqaad la'aanta? Xasaasiyadda cuntada, xasaasiyadda cuntada iyo dulqaad la'aanta cuntada ayaa ku dhacda qiyaastii 1 ilaa 4% dadka waaweyn iyo 4 ilaa 6% caruurta. Caruurta leh xasaasiyadda caanaha lo'da markay yaryar yihiin waxay caadi ahaan ka soo baxaan.
Sabababaha cunnada xasaasiyadda Waxaa laga yaabaa in aad qabtid hidde u yeelashada xasaasiyad ama dulqaad la'aan. Hadday sidaas tahay, waxay u badan tahay inaad yeelato xasaasiyad ama dulqaad la'aan. Niyad-jabka dhaxalka ah, waxaanu ula jeednaa inaad leedahay ugu yaraan hal waalid ama walaal oo leh xasaasiyad cunto ama dulqaad la'aan. Ogaanshaha dareen-xumada cuntadu ma fududa. Calaamaduhu aad bay u kala duwanaan karaan waxayna ku kala duwanaan karaan qof ilaa qof. Waxaa intaa dheer, cabashooyinku waxay sidoo kale yeelan karaan sababo kale.
Falcelinta isdhaafsiga ee udhaxeysa cuntada Haddii aad xasaasiyad ku leedahay shrimp, waxaad sidoo kale ka falcelin kartaa carsaanyada. Sababtoo ah xasaasiyadaha ku jira cuntooyinkan ayaa aad isugu dhow. Marka tani dhacdo, waxaan ugu yeernaa falcelin isdhaafsi ah.
Falcelinta isdhaafsiga ee hay fever Hay fever-ka waa xasaasiyad manka qaar ka mid ah geedaha, dhirta ama cawska. Mararka qaarkood bukaanada qaba hay fever ka ayaa sidoo kale yeesha fal-celin xasaasiyadeed marka ay wax cunayaan. Tan waxaa sidoo kale loo yaqaan falcelin-celinta isdhaafsiga. Tani waxay noqon kartaa sababtoo ah xasaasiyadaha qaarkood ee cuntada iyo manka ayaa xiriir la leh.